Isimada Puntland oo ku hawlan xallinta ismaandhaafka Dekadda Bossaso (dhegayso) – Radio Daljir
Isimada Puntland oo ku hawlan xallinta ismaandhaafka Dekadda Bossaso (dhegayso)
Diseenbar 5, 2017 12:42 b 0
Shir la xiriira xallinta muranka dekadda Bossaso ayna garwadeen ka yihiin isimada PL ayaa ka socda magaalada Bossaso, kaas oo yoolkiisu yahay sidii loo dhexdhexaadin lahaa maamulka PL iyo ganacsatada Bossaso oo ka biyo-diiday khidmado lagu kordhiyey adeeggii ay dekaddu bixin jirtay.
Hadaba Agaasimaha Guud ee wasaaradda Dekadaha ee PL C/majiid Samatar Jaafaan ayaa wareysi uu maanta siiyey Radio Daljir waxa uu kaga hadlay arrintan iyo guud ahaan sida ay haatan u socoto shaqada dekaddu. Agaasimuhu waxa uu u warramay Axmed Sh. Maxamed Tallman oo maanta bookhday dekadda Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 285 Wararka 10031